Nepalistudio » ६ महिनासम्म विज्ञ पनि नियुक्त गरेनन् विद्यासुन्दरले ६ महिनासम्म विज्ञ पनि नियुक्त गरेनन् विद्यासुन्दरले – Nepalistudio
६ महिनासम्म विज्ञ पनि नियुक्त गरेनन् विद्यासुन्दरले
जोडिएका दुईटा महानगर काठमाडौं र ललितपुरमा सात महिनाअघि सँगै चुनाव भएको थियो। काममा भने ललितपुरले काठमाडौंलाई पछि पार्न थालेको छ।
काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले एकातिर वाचाअनुसार काम गर्न नसकेको आलोचना खेप्नु परेको छ भने अर्कातिर पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा उनले दिएका अभिव्यक्ति विवादमा परेका छन्। पुरातात्विक सम्पदा लगायत महानगरका अन्य काममा उनलाई उचित राय दिने मान्छे महानगरले अहिलेसम्म नियुक्त गर्न सकेको छैन।
महानगरपालिकाले विज्ञ सदस्य नियुक्त गरेर काम गर्न सकिने सुविधा दिए पनि शाक्यले अहिलेसम्म त्यस्ता विज्ञ नियुक्त गर्न पहलसमेत गरेका छैनन्। ‘म आफैं न्यायिक, फोहोरमैला व्यवस्थापन, राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक छु,’ महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले भनिन्, ‘तर विज्ञ सदस्य नियुक्ति नहुँदा निर्णय गर्नका लागि कतिपय अवस्थामा अफ्ठ्यारो भएको छ।
उचित जानकारी र राय सल्लाह नपाउँदा धेरै काम थाती रहेका छन्।’ विज्ञ नहुँदा महानगरले सम्पदा पुनर्निर्माण लगायतका काम पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन। ‘विज्ञ सदस्य नियुक्तिको अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सबैतिर परेको छ,’ उपमेयर खड्गीले भनिन्। ६ महिनाको अवभि मेयर शाक्यले निजी सल्लाहकारका रुपमा राजेन्द्र स्थापितलाई नियुक्त गरेका छन्।
जोडिएको ललितपुर महानगरले भने १२ विज्ञ नियुक्त गरेर काम अगाडि बढाइसकेको छ। ललितपुरका मेयर चिरीबावु महर्जनले विज्ञ नियुक्तिपछ काम गर्न धेरै सजिलो भएको बताए। उनले विज्ञ नियुक्तिपछि महानगरले गर्नु पर्ने काममा सहजता आउन थाएको र कामले गति लिन थालेको बताए। ‘विज्ञ सदस्यहरुले राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ। मेरो धेरै कामको बोझ हटेको छ,’ चिरिबाबुले भने।
ललितपुर महानगरभित्र चैतमा हुने कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा कसरी लिने भन्ने विषयमा डा. केदार श्रेष्ठले अध्ययन गरिरहेका छन्। पाटन दरबार क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गर्नका लागि सम्पदा विज्ञ डा. रोहितकुमार रञ्जितले सहयोग गरिरहेका छन्। महानगरभित्र हुने सम्पदा पुनर्निर्माणको कामको खाका तयार गर्न महानरले रञ्जितलाई सुम्पिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले कात्तिक पहिलो साता नै विज्ञ सदस्य नियुक्त गरेको थियो।